Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo laga qabsaday deegaanno katirsan wadanka Yemen. – Shabakadda Amiirnuur
December 17, 2017 6:04 pm by admin Views: 121
Wararka ka imaanaya Yemen ayaa sheegaya in maleeshiyaad Maxalli ah oo dhanka cirka ay ka taageerayaan diyaaradaha isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraatka ay qabsadeen laba degmo oo katirsan gobolka Shabwah.
Telefeshin ay maalgeliso dowladda Sacuudiga ayaa faafiyay muuqaallada kooxaha muqaawamada oo qabsanaya degmooyinka Beyxaan iyo Casiinaal oo ahaa dhulkii ugu dambeeyay ee Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ay ka maamulayeen gobolka Shabwah oo dhaca Koonfur Bari wadanka Yemen.
Mas’uuliyiin u hadlay isbahaysiga ay hoggaaminayaan dowladaha Imaaraatka carabta iyo Sacuudiga ayaa sheegay in horumarkan laga gaaray furinta dagaalka Shabwah uu soo dedejin karo in Xuuthiyiinta laga saaro gobollada Ma’rib iyo Albeydaa.
Bishii lasoo dhaafay ayay maleeshiyaadka Xuuthiyiinta waxay dileen Cali Cabdalla Saalax oo isbaheysi cusub la sameystay Sacuudiga waxayna tallaabadaas dhabar jab ku noqotay Xukuumadaha Riyadh iyo Abu Dubai.